Naadiga iyo taageerayaasha Barcelona ayaa galay xaalad tii ugu adkeyd kadib markii Messi uu… – Hagaag.com
Naadiga iyo taageerayaasha Barcelona ayaa galay xaalad tii ugu adkeyd kadib markii Messi uu…
Posted on 26 Agoosto 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Wixii ay taageerayaasha Barcelona ka baqayeen ayaa run noqday, Lionel Messi ayaa si rasmi ah u weydiistay inuu ka tago Barcelona isla markaana uu jahada ka lumiyey ku tala galkii maamulka, kuwaasi oo wajihi doona xaaladii ugu adkeyd ee taariilhda casriga ah ee kooxda.
Guul darradii ay kooxda kala kulantay kooxda Bayern Munich 8-2 ​​wareegii sideed dhamaadka Champions League ayaa kacaan ka abuurtay Barcelona dhexdeeda taasoo ku bilaabatay ceyrintii tababare Quique Setien iyo saxiixa macallinka cusub ee reer Holland Ronald Koeman.
Waqtigaas wuxuu ahaa bilowga nuxnuxda dadweynaha ee ku saabsan rabitaanka Messi inuu ka tago Barcelona, ​​waxaana wararkaasi mar walba laga hor keenayay inuusan kooxda ka tegi karin maadaama qandaraaskiisa uu ku jiro shardi ah ganaax 700 milyan euro.
Si kastaba ha noqotee, wararka maanta waxay xaqiijinayaan in ciyaaryahanka uu qaatay go’aankiisa isla markaana uusan ka laaban doonin, waxaana halkaan su’aashu ka taagan tahay, muxuu u qaatay go’aankan, maxaase sababi kara furiinka suurtagalka ah ee labada dhinac?
Maamulka – oo uu hoggaamiyo Madaxweyne Josep Maria Bartomeu – ayaa loo arkaa inuu yahay kan ugu daran ee ka soo horjeeda Messi inuu naadiga ka dalbado bixitaan iyadoo duruuftan adag ay jirto. Laacibka ma qarsan caradiisa qaraaro badan oo ay qaateen maamulka naadiga oo ugu horeeyo inay fasaxaan saaxiibkiisa reer Brazil Neymar uu aado PSG sanadkii 2017, islamarkaasina awoodi waayeen bedelkiisa inay kooxda keenaan walow ay bixiyeen lacag badan.
Messi ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka sida weyn uga soo horjeeday go’aanka ah inuu ka tago tababarihiisii ​​hore Ernesto Valverde, bilihii ugu dambeeyayna wuxuu khilaaf toos ah la galay agaasimihii hore ee kubada cagta Eric Abidal kadib hadaladii u dambeeyay ee uu ku eedeeyay ciyaartoydu inay dayaceen tababarka.
Intaasi oo dhan waxaa ugu sii darnaa guuldaradii sharaf dhaca aheyd ee kooxda ka soo gaartay Bayern Munich, taasi ayaa iyaduna ka mid ah tan soo dedejisay go’ aanka tegidiisa, sidoo kale kulankii uu la qaatay macalinka cusub Ronald Koeman kaasi oo u muujiyey adadeeg una sheegay inuusan mudnaan gaar ah siin doonin ciyaaryahan kasta oo kooxda ka tirsan.
Si ka duwan tababarayaashii hore ee raalli gareyn jiray Messi had iyo jeer, laakin Koeman wuxuu doortay in shirkiisii ​​jaraa’id ee ugu horeeyey uu farriin aan toos aheyn u diro ciyaaryahanka markii uu sheegay inuu kaliya la shaqeyn doono kuwa ku qanacsan inay kooxda la sii joogaan.
Sidoo kale Qaabka uu Koeman ula dhaqmay weeraryahan Luis Suarez – oo ah saaxiibka ugu dhow Messi – ayaa sidoo kale soo dedejisay go’ aankiisa.
Website-yada Isbaanishka ayaa xaqiijiyay in xiddiga reer Argentina uu ka careysnaa sida Suarez loogu wargaliyay go’aanka ah in laga maarmay adeegiisa isagoo aan lagu ixtiraamin wixii uu u soo qabtay kooxda sanadihii la soo dhaafay.
Taageerayaasha kooxda Barcelona ayaa jidka u soo baxay daqiiqado ka dib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Lionel Messi uu go’aansaday inuu ka tago kooxda.
Taageerayaasha ayaa isugu soo ururay agagaarka garoonka Camp Nou waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ku dalbanayaan inuu shaqada ka tago madaxweynaha kooxda Josep Maria Bartomeu, waxayna ku eedeeyeen inuu sabab u yahay xaalada kooxda haatan ka jirta.
Waxay sidoo kale u heeseen Messi waxayna weydiisteen inuu la sii joogo kooxda, oo kula guuleystay dhamaan horyaallada ay suurtogalka aheyd, waxay carabka ku adkeeyeen inaysan dooneynin inay arkaan koox aanu ku jirin xiddiga reer Argentina.
Barcelona ayaa ku jirta xaalad degdeg ah sababtuna tahay go’aanka Messi, kabtankii hore ee Barcelona Carles Puyol ayaa si degdeg ah ugu muujiyey midnimo Messi, sidoo kale waxaa bartiisa Twitter-ka uu Suarez kaga jawaabay sacab iyo foori, isagoo muujinaya taageerada Messi – saaxiibkiis ugu dhow.
Taageerayaasha naadiga reer Catalan ayaa sugaya jawaabta maamulka, waxayna suxufiyiin badan oo isboorti ay xaqiijiyeen in Messi uu go’aansaday inuu baxo oo uusan badali doonin go’aankiisa marka laga reebo haddii uu is casilo Bartomeu mooyee.